डिजिटलमा प्रियंका - मनोरञ्जन - नेपाल
जमाना डिजिटल वेब सिरिजको छ, जहाँ बलिउडका कलाकार डिजिटल प्लेटफर्म युट्युब र नेटफ्लिक्समा डेब्यु गरिरहेका छन्, नेपाली कलाकार पनि के कम !
छक्का पञ्जाकी नायिका प्रियंका कार्कीले युट्युबमा वेब सिरिज खेलेकी छन् । जस्ट एनोदर लभस्टोरीमा प्रियंकाले अभिनय मात्र होइन, निर्देशन, सम्पादन र निर्माण पनि गरेकी छन् । उनले शान बस्न्यातसँग मिलेर यसलाई लेखेकी हुन् ।
समलैंगिक विषयमा बनेको वेब सिरिज युट्युबमा हिट भइरहेको छ । सिरिजमा सृष्टि श्रेष्ठ पनि मुख्य भूमिकामा छन् ।
२९ भदौबाट सुरु सिरिजको ६ वटा एपिसोड प्रसारण भइसक्यो । समलैंगिक विषयलाई सूक्ष्म ढंगले प्रस्तुत गरेकाले सिरिजले दर्शकको मन जितिरहेको छ । सिरिजबाट प्रियंकाको अभिनयका साथै निर्देशनको क्षमता पनि प्रशंसित भइरहेको छ । के अब प्रियंकाले फिल्म निर्देशन पनि गर्लिन् ?
ट्याग: नेपाल मण्डलनायिका प्रियंका कार्की नायिका सृष्टि श्रेष्ठजस्ट एनोदर लभस्टोरी